AHOANA NO FOMBA HAMORONANA FAMPIHARANA VK - VKONTAKTE - 2019
Ahoana no fomba hamoronana fampiharana VK
Ho an'ny vondrom-piarahamonina ao amin'ny tambajotra sosialy VKontakte dia mila dokam-barotra mety, izay azo atao amin'ny alalan'ny endrika na famerenana manokana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hifanakalo hevitra momba ny fomba ahafahanao miresaka momba ny vondrona.
Ny dikan-teny feno an'ny tranonkala VK dia manome fomba maro samihafa, izay tsy misy ifandraisany amin'ny tsirairay. Na izany aza, tsy tokony hadinontsika fa ny dokam-barotra rehetra ihany no mijanona raha tsy manelingelina.
Jereo koa: Ahoana no hamoahana VK
Fomba 1: Fanasana ny vondrona
Ao amin'ny tambajotra sosialy izay heverina fa misy ireo endri-tsoratra fototra dia misy fitaovana maro izay mampiroborobo ny dokambarotra Izany koa no mandeha ho azy. "Manasa namana", nalaina avy amin'ny singa iray samihafa tao amin'ny menio ny vahoaka ary nofaritanay tamin'ny an-tsipiriany tamin'ny lahatsoratra iray hafa tao amin'ny tranokalanay.
Vakio bebe kokoa: Manasa ny vondrona VK
Fomba 2: Lazao ny vondrona
Amin'ny tranga amin'ity fomba ity dia afaka mamerina miverimberina amin'ny rindrin'ny mombamomba anao ianao, mamela rohy mankany amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny sonia, ary amin'ny fepetran'ny vondrona. Amin'izay fotoana izay ihany koa mba hamoahana ny fampisehoana eo amin'ny rindrin'ny vondrona, mila manana zo mpiaro eo amin'ny sehatra ianao.
Jereo koa: Ahoana ny fomba hanampiana mpitantana any amin'ny vondrona VC
Sokafy ny sakafo maina "… " ary mifidiana avy amin'ny lisitra "Lazao namana".
Fanamarihana: Io endri-javatra io dia tsy misy afa-tsy ho an'ny vondrona misokatra sy pejy ho an'ny daholobe.
Ao amin'ny varavarankely "Alefaso firaketana an-tsoratra" mifidiana singa Mpinamana sy mpandray anjara, raha ilaina, ampidiro ao anaty sehatra mifanaraka amin'izany ary tsindrio "Mizara ny rakitsoratra".
Aorian'izany, hisy fidirana vaovao hiseho amin'ny rindrin'ny pejinao miaraka amin'ny rohy mankany amin'ny fiarahamonina.
Raha mpitantana vondrom-piarahamonina ianao ary te-hametraka adiresy amin'ny rindrin'ny vondrona hafa, "Alefaso firaketana an-tsoratra" asio marika eo anoloan'ilay singa Mpifanaraka amin'ny Community.
Avy amin'ny lisitra fidirana "Ampidiro ny anaran'ny fokonolona" Safidio ny vahoaka maniry, toy ny teo aloha, ampio tsetsatsetsa ary tsindrio "Mizara ny rakitsoratra".
Ankehitriny dia hisy fanasana hapetraka eny amin'ny rindrin'ny vondrona voafantina.
Ity fomba fiasa ity, toy ilay teo aloha, dia tsy tokony hitondra olana aminao.
Azonao atao ny miresaka momba ny vahoaka amin'ny alàlan'ny fampiasana finday ofisialy amin'ny fomba tokana, amin'ny fandefasana fanasana amin'ny namana tsara. Angamba izy io fotsiny amin'ny karazana fiarahamonina. "Group"ary tsy "Public Page".
Fanamarihana: Azo atao ny mandefa ny fanasana avy amin'ireo vondrona misokatra sy mihidy.
Jereo koa: Inona no mampiavaka ny vondrona avy amin'ny pejin'ny VK
Ao amin'ny pejin-tserin'ny olom-pirenena ao amin'ny zoro havanana ankavia dia tsindrio ny sary "… ".
Avy ao amin'ny lisitra, tokony mifidy sehatra iray ianao "Manasa namana".
Ao amin'ny pejy manaraka, tadiavo ary fidio ilay mpampiasa tianao, amin'ny fampiasana ny rafitra fikarohana raha ilaina.
Rehefa tapitra ireo hetsika voalaza ireo dia halefa ilay fanasana.
Fanamarihana: Ny mpikirakira sasany dia mametra ny fanasana amin'ny vondrona.
Ny mpampiasa voafantina dia hahazo fanairana amin'ny alàlan'ny rafitra fampandrenesana, ary ny varavarankely mifanaraka amin'izany dia hiseho eo amin'ny fizarana "Groups".
Raha sendra olana na fanontaniana dia mifandraisa aminay amin'ny fanehoan-kevitra. Ary mihintsy ity lahatsoratra ity.